Dalxiiska, Isbeddelka Cimilada, Eber Saafi ah: Sacuudi Carabiya aragti cusub oo caalami ah waqtiga COP26
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Dalxiiska, Isbeddelka Cimilada, Eber Saafi ah: Sacuudi Carabiya aragti cusub oo caalami ah waqtiga COP26
Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • News • Sacuudi Carabiya Warka • Wakhtiga waarta • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wtn
Isbaheysiga Cusub ee Caalamiga ah ayaa Dardar gelin doona Isbedelka Warshadaha Dalxiiska ee Net Zero (PRNewsfoto/Wasaaradda Dalxiiska ee Sacuudi Carabiya)
Sacuudi Carabiya waxay isu keentaa ciyaartooyda dalxiiska si ay uga jawaabaan saameynta masiibada adduunka iyo muhiimada muhiimka ah ee isku dhafka habka caalamiga ah.
Kala -guurka Net Zero: Waa hindise cusub oo loogu talagalay warshadaha socdaalka iyo dalxiiska ee caalamka
Warshadaha dalxiiska ee caalamiga ah ayaa mas'uul ka ah 8% ee gaaska aqalka dhirta lagu sii daayo
Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa maanta billowday, Boqortooyada waxay mudnaanta siisay tallaabo degdeg ah oo lagu taageerayo qaybtan muhiimka ah ee u gudubka eber.
Isbahaysiga Cusub ee Caalamiga ah ayaa Dardar gelin doona Kala -guurka Warshadaha Dalxiiska ee Net Zero
Dawladda Sacuudi Carabiya ayaa bilawday Xarunta Caalamiga ah ee Dalxiiska Sustainable Tourism (STGC), oo ah isbahaysi wadamo badan leh, oo dhinacyo badan leh, kaas oo dardar gelin doona u gudubka waaxda dalxiiska ee qiiqa eber-ka ah, iyo sidoo kale kicinta ficil lagu ilaalinayo dabeecadda iyo taageerada bulshooyinka.
Waxaa maanta billaabay dhaxal sugaha HRH Amiir Maxamed Bin Salmaan, Xarunta Caalamiga ah ee Dalxiiska waarta waxay taageeri doontaa socotada, dawladaha, iyo waaxda gaarka loo leeyahay, si loo hubiyo in dalxiisku awood u yeesho kobcinta iyo abuurista shaqooyin, iyada oo kaalinteeda ka qaadanaysa in la gaaro himilooyinka cimilada ee lagu qeexay Paris Heshiiska, oo ay ku jirto wax ku biirinta in adduunka lagu ilaaliyo kulaylka 1.5-degrees Celsius.
Xarunta Caalamiga ah waxay noqon doontaa madal lagu keeno dhammaan aqoonta iyo khibradda; waxay ujeedadeedu tahay inay noqoto “xiddigta waqooyi” ee waaxda dalxiiska maadaama ay ka soo kabanayso masiibada COVID-19 una gudubto mustaqbal waara. Caalami ahaan, dalxiisku wuxuu taageeraa in ka badan 330 milyan oo hab-nololeed-iyo ka hor masiibada, waxay mas'uul ka ahayd abuurista afartii shaqooyin cusub mid kasta oo adduunka ah.
Faahfaahinta isbahaysigan iyo adeegyada ay bixin doonto ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqi doonaa inta lagu jiro COP26.
Mudane Axmed Al Khateeb, Wasiirka Dalxiiska ee Sacuudi Carabiya ayaa yiri: “Qeybta dalxiiska ayaa ka qeyb qaadata 8% gaaska hawada sare ee qiiqa - taasna waxaa la filayaa inay kororto haddii aanan hadda tallaabo qaadin. Dalxiiska sidoo kale waa qayb aad u kala qaybsan. 80% ganacsiyada dalxiisku waa ganacsiyo yaryar iyo kuwo dhexdhexaad ah kuwaas oo ku tiirsanaanta hagista iyo taageerada hoggaanka qaybta. Waaxdu waa inay qayb ka noqotaa xalka.
"Sacuudi Carabiya, iyadoo raacaysa aragtida iyo hoggaanka sare ee Boqortooyada, Amiirka dhaxalka leh, ayaa ka jawaabaya baaqan muhiimka ah iyadoo la shaqeyneysa la-hawlgalayaasha - mudnaanta siiya dalxiiska, SMEs iyo cimilada - si loo abuuro wadamo badan, isbahaysi dhinacyo badan leh, kaas oo hogaamin doona , dardar geliyaan, oo ay la socdaan kala -guurka wershadaha dalxiiska ee qiiqa saafiga eber.
"Marka la wada shaqeeyo oo la bixiyo madal wadajir ah oo xooggan, waaxda dalxiisku waxay heli doontaa taageerada ay u baahan tahay. STGC waxay fududeyn doontaa koritaanka iyadoo ka dhigaysa dalxiiska mid u wanaagsan cimilada, dabeecadda, iyo bulshooyinka. ”
Gloria Guevara, oo ah la taliyaha gaarka ah ee wasiirka dalxiiska, ayaa tiri: “Sannado iyo sannado, ciyaartoy badan oo ka socda waaxda dalxiiska ayaa ka shaqeynayay dadaallo kala duwan oo lagu dardar gelinayo tartanka si eber ah - laakiin waxaan ku shaqeynaynay silo. Saameynta masiibada adduunka ku yeelatay waaxda dalxiiska ayaa muujisay ahmiyadda muhiimka ah ee wadashaqeyn dhinacyo badan leh. Haatanna, Sacuudi Carabiya ayaa xoojineysa inay isu keento daneeyayaasha si ay dalxiiska uga mid noqoto xalka isbedelka cimilada. ”
Gloria waxay ahayd agaasimihii hore ee Golaha Socdaalka iyo Dalxiiska Adduunka (WTTC)
Dhul-gariir xooggan oo ku dhuftay jasiiradda Indonesia ee...
NASA waxay ku abaalmarisay Qandaraaska Daraasaadka Sariirta DLR
Bandhiga cusub ee Beijing ayaa daaha ka qaaday ilbaxnimadii hore ee bani aadamka
Maamulka Dalxiiska ee Malta ee Waqooyiga Ameerika ayaa hadda ku guuleystay 3-da ugu wanaagsan...